Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan?
Bulsha:- Umad walba waxa ay leedahay caado iyo dhaqan u gaar ah ayadoona taa ay tahay awood Eebe uu ku maneystay bulshooyinkasi, waana mid keentay in maqaalo iyo bayaan laga sameeyo wacyiga Galmada saxda ah
ee u dhaxeeya labada dhinac ee doonaya in ay isu tagaan.
Muuqaaladaasi ayaa ah mid inta badan dadka isqaba aysan ku qanacsaneen ayadoona qaabab iyo muuqaalo
kaa yaabiya aad ku arkeyo mararka qaar ayadoo lagu soo daabacayo jaraa’idyada.
Awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo dhaqdhaqaaqooda xilliga ay galmadu dhacayso, taasi oo iyana ku xiran hadba aqoonta ay u leeyihiin arrintaasi.
Ha yeeshee fursadda uur­qaadistu waxay yaraataa kolka la isticmaalo qaab keena inay xawadu dibadda u soo baxdo.